Banyere US - Chapman Technology Co., Ltd.
Mmadụ bịa ka Onye kere Chapman ụlọ ọrụ, E hiwere ya na 2008. Anyị nwere asambodo SGS na sistemụ njikwa mma 9001 ISO.
Ebu ubi, Onye na-eme Chapman bụ ọkachamara na ịmepụta na ịmepụta ụdị plastik ọ bụla site na HASCO, DME, LKM, MISUMI ọkọlọtọ na nyocha usoro nyocha. Anyị na-enye DFM ndị ahịa na ụbọchị 2 maka ịkpụzi ebu na arụmọrụ dị elu. Anyị na-enye ezi mma na kacha mma ọrụ oversea ahịa na-enwe kwa izu akụkọ nke n'ichepụta usoro.
Ngalaba mmepe ngwaahịa, Ka anyi mee ka echiche gi buru ihe ahia na ahia. Anyị nwere agụụ maka idozi nsogbu site na nyocha zuru oke na echiche echebara echiche. Na injinia, imewe, mmemme na imepụta ụlọ, enweghị ihe anyị enweghị ike ịme.
Onye kere Chapmannwere ịnyịnya ike dị mkpa iji mezue ọrụ na oge, nka-setịpụrụ iji meziwanye usoro mmepe ka achọrọ, yana ihe ọhụrụ iji chọta ihe ngwọta maka nsogbu ndị kacha sie ike. Site na ijikọta imewe na injinia ọnụ, anyị na-ewere echiche ọzọ, ọsọ ọsọ, na-enye ndị ahịa anyị ihe ndị na-azụ ahịa, na-echepụta ihe nrụpụta n'okpuru usoro nhazi.
Nnukwu echiche foto anyị na-eche ebumnuche gị ihu na etiti. Anyị na-enyere ndị ahịa anyị aka ịhazi ma weta ahụmịhe ahịa na-eme ka akara ha dịkwuo mma ma gafere mkpa ndị ahịa. Ezubere mmekọrịta a ka ọ bụrụ ihe siri ike na anụ ahụ na nke mmụọ yana ọ bụ nkwenye nke nkwa ndị ahịa anyị. Anyị lekwasịrị anya na ebumnuche njedebe nke onye ahịa anyị. Ma ha bụ ebumnuche azụmaahịa, ebumnuche akara, ma ọ bụ ịhazi oge anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ na ndị ahịa anyị iji nweta ha.
Anyị na-enye ndị ahịa ọrụ nkwụsịtụ site na ihe ọhụrụ, ịmepụta, injinia, n'ichepụta na njikwa njikwa na ọnụahịa asọmpi.
"Creatmepụta uru maka ndị ahịa na ime ka ọ zuo oke" bụ nkà ihe ọmụma anyị. Ga-enweta uru ka ukwuu site na ịrụ ọrụ ọnụ Onye kere Chapman!